June 2021 - SANTHITSA
မြတ်စွာဘုရားရှင်၊ ရဟန္တာများ နှင့် အရိုးကွင်းဆက်များ အကြောင်း
မြတ်စွာဘုရားရှင်၊ ရဟန္တာများ နှင့် အရိုးကွင်းဆက်များ အကြောင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အရိုးကွင်းဆက်တော်များ အကြောင်း ဖူးမျှော် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ “လူသားတွေရဲ့ အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပုံက “ကွင်းဆက် ချိတ်ဆက် တေ့ဆက် လို့ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသားတွေရဲ့ အရိုးက “ကွင်းဆက်” ဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်မြင့်မြတ်သူတွေရဲ့ အရိုးက” ချိတ်ဆက် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် မြင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ရိုးရိုးလူသားတွေရဲ့ အရိုးကတော့ “တေ့ဆက် တွေချည်းပါ။ အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားတွေဆိုတာ သစ္စာလေးပါး အမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင်လဲသိ ကျွတ်ထိုက်သမျှ ဝေနေယျတွေကိုလည်း သိအောင်ဟောပြောညွှန်ပြတော်မူနိုင်တဲ့ “သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်” တွေပါ။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်အားလုံးရဲ့ အရိုးတော်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ” ကွင်းဆက် “ဆက်နေကြပါတယ်။ …
အဖေအရင်းနဲ့ သမီးယူလိုက်တဲ့ မလေးက အရှုတ်ထုတ်မိသားစု (ဘုရား ဘုရား ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေတာလဲ)
အဖေအရင်းနဲ့ သမီးယူလိုက်တဲ့ မလေးက အရှုတ်ထုတ်မိသားစု မောင်ယဿ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မလေးရှား အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကတော့ တော်တော် စိတ်ရှုတ်စရာ ကောင်းသလို သံဝေဂ ရစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စယာရိရချ် ပြည်နယ်ရှေ့နေတစ်ဦးက အဲ့ဒိကိစ္စကို လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ဖွလိုက်တာပါ။ သူတို့ပြည်နယ်က မိသားစုတစ်စုမှာ အဖေနဲ့ သမီးအရင်း လက်ထပ်တဲ့ ကိစ္စကို သူကအသိသက်သေ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ အသက် ၄၀ အရွယ် အဖေက အသက်၂၀အရွယ် သမီးမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရလာလို့ တရားဝင်ယူ လိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေမှာက အဖေနဲ့ သမီးယူလို့ မရဘူးလို့ မပါတဲ့အတွက် ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့ သားအဖ …
သမိုင်းမှ ထီးနှင့်နန်းကို ငြင်းဆန်သူ ၇ ယောက်အကြောင်း
သမိုင်းမှ ထီးနှင့်နန်းကို ငြင်းဆန်သူ ၇ ယောက်အကြောင်း (၁) ဘုရင့်နောင် ပုဂံသက္ကရာဇ် ၉၀၁ ခုနှစ်တွင် တပင်ရွှေထီးသည် ဟံသာဝတီကို ပြုပြင်ချဲ့ထွင်၍ ဟံသာဝတီ၌ စံလေသည်။ ၉၀၃ ခုနှစ်တွင် ယိုးဒယားကို နိုင်သည်။ ယိုးဒယားကအပြန် သင်္ဘောသား ပေါ်တူဂီဘုရင်ဂျီကို အထင်ကြီး မြှောက်စားမိရာမှ ထိုသူဆက်သ သော အရက်ကို သောက်မိရာ မောင်ကျန်တစ်တို့နှင့် အရက်စွဲကာ ယစ်ထုပ်ကြီးဘဝရောက်ရရှာသည်။ သစ္စာကြီးသော ဘုရင့်နောင်က ဖျောင်းဖျနားချပါသော်လည်း မရတော့၊ အရက်ကို သူမဖြတ်နိုင်တော့ပြီ၊ ပေါရိသာဒသည် လူသားကို မစွန့်နိုင်သဖြင့် တိုင်းပြည်ကို စွန့်သလို တပင်ရွှေထီးလည်း အရက်ကို မစွန့်နိုင်သဖြင့် တိုင်းပြည်ကို စွန့်လေသည်။ ”နောင်တော်…ကျွနု်ပ်ကို ဘယ်လိုမှ နားချမနေနဲ့တော့၊ …
သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိတဲ့သူတွေ မင်းဘဝထဲ ရောက်လာလိမ့်မယ်
သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိတဲ့သူတွေ မင်းဘဝထဲ ရောက်လာလိမ့်မယ် တန်ဖိုးရှိအောင်နေ ၊တန်ဖိုးမသိတဲ့သူတွေ သူဘာသာ ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ဂရုစိုက် ရိုးသားခြင်းထက် ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးဖို့ ကောင်းတဲ့အရာ မရှိဘူး။ လောကသဘောက ရှင်းရှင်းလေး ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကောင်းကံ ဆိုးကံနောက်ဆုံး ကိုယ်ပြန်ခံရတာပဲ။ #အရှင်ဇဝန (ရွှေလင်းယုန်) မာနတွေ သိပ်မထားပါနဲ့ … မထားသင့်တဲ့ မာန်မာနကသင့်ကမ္ဘာကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ လူတွေကို အပြုံးနဲ့ စတင်နှုတ်ဆက်ဖို့ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးပါနဲ့ အပြုံးတွေက တစ်ဖက်လူကို ပျော်ရွှင်စေသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပီတီ ဖြစ်စေတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာဆိုတာ အမြဲရှိပြီးသားပါ သင့်တစ်ယောက်တည်း မပျော်ရွှင်ပဲ ဝမ်းနည်းနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝဆိုတာ ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုလို မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက် ခေါင်းနဲ့ …
ကြွေရုပ်လေးလို ကြည်လင်လှပတဲ့ မျက်နှာလေး ပိုင် ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်နော်
ကြွေရုပ်လေးလို ကြည်လင်လှပတဲ့ မျက်နှာလေး ပိုင် ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်နော် ပြီးပြည့်စုံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ မျက်နှာလေး ကြည်လင်လှပစေဖို့ ပေါင်းတင်တာ၊ ချေးချွတ်တာတွေ အမျိုးမျိုး လုပ်နေကြတာပေ့ါ။ ဒါပေမဲ့ လှချင်လွန်းလို့ဆိုပြီး ခဏခဏလုပ်နေမယ်ဆိုရင် မျက်နှာအသားအရည်ကို ပိုပြီးတောင် ပျက်စီးစေပါတယ်တဲ့။ ကြည်လင်သန့်စင်တဲ့ မျက်နှာလေး ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် သတိထားရမယ့် အချက်လေးတွေကတော့… ၁) မျက်နှာကပ်ခွာ ပေါင်းတင်တဲ့အခါ… တစ်လကို အများဆုံး ၂ခါလောက်ပဲ ပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေ သုံးပေးသင့်ပြီး ကပ်ခွာကပ်ထားတဲ့ အခါမှာ လည်း ၁၅မိနစ်ထက်ပိုပြီး မထားသင့်ပါဘူး။ ကပ်ခွာကပ်ပြီး တစ်ညလုံး အိပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကိုသတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ၁၅မိနစ်ပြည့်ရင် မမေ့မလျော့ ခွာပေးပါ။ မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာ …
ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်စရာမလိုဘဲ ၂၁ ရက် လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ ပိန်သွယ်စေမယ့် နည်းလမ်း
ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်စရာမလိုဘဲ ၂၁ ရက် လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ ပိန်သွယ်စေမယ့် နည်းလမ်း သင်က လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် မလုပ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချချင်တယ် ဆိုရင် ၂၁ ရက် လမ်းလျှောက် plan ကို ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းက အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး ကိုလည်း အလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ပထမအပတ် Day 1 – မနက်မှာ ၅ မိနစ်ကြာ၊ ညနေမှာ ၅ မိနစ်ကြာ လမ်းလျှောက်ပါ။ Day2– မနက်မှာ ၇ မိနစ်ကြာ၊ ညနေမှာ ၇ မိနစ်ကြာ လမ်းလျှောက်ပါ။ Day3– …
ပြားချပ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက် နဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ခါးလေး ရဖို့ ထိုင်ခုံတစ်လုံးသာလို…
ပြားချပ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက် နဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ခါးလေး ရဖို့ ထိုင်ခုံတစ်လုံးသာလို… ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီလေး လိုချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းပါပဲနော်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်တွေမအားတာရယ်၊ Gym မှာ သွားကစားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် လှလှလေးရဖို့က လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းလေးကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ၀မ်းဗိုက်သားလေး ပြားချပ်ဖို့နဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ခါးလေးရဖို့ ကုလားထိုင်တစ်လုံးသာ လိုပါတယ်တဲ့။ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာဖြစ်လို့ တီဗီကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ လုပ်မလား၊ ခဏတဖြုတ် အညောင်းညာဖြေရင်းနဲ့ပဲ လုပ်မလား ရွေးရုံပါပဲ။ ကဲ ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁) ကတ်ကြေးလေ့ကျင့်ခန်း ပထမဆုံးကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ချလိုက်ပါ။ …
ခြင်တွေ ပြေးအောင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅) ပင် စိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော် မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေ၊ ခြင်ဖျန်းဆွေးတွေနဲ့ နှိမ်နှင်းနေတုန်းလား? ဒါက အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အန္တရာယ်များလွန်းပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန္တရာယ်မများဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခြင်တွေပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အပင်စိုက်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်၊ ခြင်တွေကိုလည်း သဘာဝ နည်းလမ်းအတိုင်း နှိမ်နှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေဟာ မိမိတို့ မီးဖိုခန်းအတွက်လည်း အသုံးဝင်တာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ …
တန်ဖိုးမသိတဲ့ လူတွေအတွက်နဲ့ ကျွန်မတန်ဖိုးကို မမဲ့စေချင်ဘူး…
တန်ဖိုးမသိတဲ့ လူတွေအတွက်နဲ့ ကျွန်မတန်ဖိုးကို မမဲ့စေချင်ဘူး… ကျွန်မလျှောက်တဲ့လမ်းက ဆူးခင်းလမ်း ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မဆက်လျှောက်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိနေလို့ပါပဲ။ ကျွန်မဘဝက ကြးတမ်းတယ်လို့ ငြီးပြီး ငိုမနေဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မဝမ်းနည်းရင် နှစ်သိမ့်မယ့်သူက ကျွန်မပဲ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်မ လဲကျခဲ့ရင်တောင် ပြန်ထဖို့ လက်တစ်စုံကို စောင့် မနေခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မခွန်အားနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပြန်ထတတ်အောင် အရှုံးတွေထဲက ခဏခဏ သင်ခန်းစာတွေ ရခဲ့ဖူးလို့ပါပဲ။ ကျွန်မ ချစ်နေခဲ့ရင်တောင် မေ့ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြန်တမ်းတနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို အချစ်က ခါးသီးစွာရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာဆိုတာခဏခဏ ထိုးဆွနေလို့ ခံစားရနေတာထက် ပိုပြီး …
အနှေးယာဉ် လုပ်သားကြီးများကို စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများလှူဒါန်း
အနှေးယာဉ် လုပ်သားကြီးများကို စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများလှူဒါန်း ယခုကာလဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အများစု အခက်အခဲ မျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာ လူတိုင်းအသိပါ။ အဲ့ဒီထဲကမှ အခြေခံလူတန်းစားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ သူတွေက အခက်အခဲကို ပိုပြီး ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လိုအပ်သူကို ဖေးမကူညီတတ်တဲ့ အလေ့အထဟာလည်း ချစ်စရာ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီနေ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်မှာ အနှေးယာဉ် လုပ်သားကြီးများကို စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းနေတာကို တွေ့ရလို့ သာဓုခေါ်ပြီး မုဒိတာပွါးရပါတယ်။ အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးမှ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ပါဝင်လှူဒါန်းကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နယုန်လပြည့်နေ့” အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ (၇၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မှာ ဆရာတော်ကြီး …
Copyright©2018 Santhitsa. All Rights Reserved